Heart To Heart Nail Paradise Beauty Salon | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Heart To Heart Nail Paradise Beauty Salon | Sanchaung
Heart To Heart Nail Paradise Beauty Salon
Nail / Eye Beauty / Beauty Others
HEART To HEART, Nail Paradise သည် အမှတ် (၄၀)၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော လက်သည်းပန်းချီများကို ခေတ်မီလှပသောဒီဇိုင်းများ၊ Green environmental products များသုံးပီး Customer များ စိတ်တိုင်းကျ ပုံဖော်ပေးသည့် Nail Paradiseဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။
10am~8pmပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သည့်အပြင် ဈေးနုန်းသင့်တင့် မူရှိသောကြောင့် စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရရှိမေည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။
Nail | Eye Beauty | Beauty Others
09:00 AM - 05:00 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
No.40, Ganamar Street, Sanchaung Township.
HEART To HEART, Nail Paradise, located at No. 40, Ganamar street, Sanchaung township, Yangon. We serve the extending nail, Glaze nail, shellac nail gel, redwine nail gel, colorful nail gel, 2D, 3D nail art, watermark, and so on. Provide the best service and resonable price. Opening hours foraday is 10 am to 8 PM and open everyday. Is one of the best nail art in Yangon.
Hlaing Htate Htar Hair & Beauty
Queen's Rose Fitness Center (1)
Dental Care, Beauty Others